Mabhuku anoenderana nezviitiko chaizvo zvatinokurudzira | Zvazvino Zvinyorwa
Pakusarudza bhuku kune akawanda mavara emhando yekusarudza kubva. Nekudaro, imwe yacho ndeye "chokwadi chaicho." Ndokunge, tiri kutaura nezvemabhuku panotaurwa nyaya yakaitika muhupenyu chaihwo. Aya mabhuku anoenderana nezviitiko chaizvo zvinokanganisa nekuti iwe uri kuziva chimwe chinhu chakanyatsoitika.
Muchokwadi, tinogona kuwana kuwanda kwe mienzaniso yemabhuku anoenderana nezviitiko chaizvo, vamwe vanozivikanwa zviri nani kupfuura vamwe. Iwe unoda here kuziva mamwe acho?
1 Iwo mabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo, anogara akatendeka kune izvo zvakaitika?
2 Mabhuku akanakisa anoenderana nezviitiko chaizvo
2.1 Orange ndiyo nhema nyowani
2.3 Mabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo: Horror anogara pano
2.5 Mabhuku akavakirwa pazviitiko zvechokwadi: Kuda
2.6 Ana Frank dhayari
2.7 Mabhuku anobva pazviitiko chaizvo: Iyo Chikara cheFlorence
2.8 Vasikana vewaya
2.9 Mabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo: Iyo Exorcist
2.10 Rwiyo rwunonaka
Iwo mabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo, anogara akatendeka kune izvo zvakaitika?
Tine hurombo kukuudza kuti hapana mhinduro iri nyore kumubvunzo uyu. Chikonzero ndechekuti zvinoenderana nebhuku rega rega, kuti ndiani anorinyora, kuti rakanangana nei ... Bhuku rakanyorwa mumunhu wekutanga nemunhu akacherekedza chiitiko hachina kufanana nemunhu akararama.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti dzimwe nguva iyo nyaya inowanzo kutaurwa nenzira iyo zviitiko zvisina kuitika sezvakatsanangurwa mubhuku, asi ndiyo yepedyo kune chokwadi (sezvo isu tiri kutaura nezve mabhuku anoenderana nezviitiko chaizvo). Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti aya mabasa mubatanidzwa wenoverengeka, mapurisa uye kuferefeta kwenhau, uye ruzivo rwemunhu mumwe chete. Pane mutsetse wakanaka pakati pawo ese aunogona kugadzira kuti pane zvakadzama zvinoiswa asi izvo chaizvo pachazviri pachazvo zvaive zvisina kukosha, kana iwo ruzivo kuitira kuti muverengi asarasika.
Ehe, pachave nemabhuku anowoneka kupfuura mamwe. Naizvozvo, kana iwe uchida iyi genre, iyo inobata zviuru zvevanhu, saka tinopa mamwe mabhuku.
Mabhuku akanakisa anoenderana nezviitiko chaizvo
Pakati pavo, tinoda kukurudzira zvinotevera:
Orange ndiyo nhema nyowani
Orange Ndiyo Mutsva Mutsva: ...
Iri basa naPiper Kerman, rakanyorwa muna 2010, richakuudza nyaya yacho, mumunhu wekutanga, sezvo iri nhoroondo yeupenyu, yemukadzi, Piper Kerman, aive akabatwa nemhosva yekutengesa zvinodhaka pamwe nekubiridzira mari. Nekudaro, pamusoro pekukuudza kuti sei akagumira ipapo, shoropodza mabatirwo anoitwa vasungwa uye nemabatiro akaitwa nyika.
Iwe unogona kunge wakamboona iyo yeNetflix nhevedzano (iyo yakabuda muna 2013) uye kuti yaive budiriro inoshamisa.
Yakanyorwa naIsabel Allende, iyo nyaya iwe yaunowana pakati pemapeji ayo ndeyake mwanasikana wako, anorwara ne porphyria uye akaoma mitezo. Neichi chikonzero, anotaurira mabatirwo anoitwa amai nedambudziko remwanasikana wavo uye kuti rinobata sei vanhu vese vaanosangana navo.
Mabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo: Horror anogara pano
Pano Urarame Zvinotyisa. Iyo ...
Yakanyorwa naJay Anson muna 1977, Uchasangana na kuunganidzwa kwezvose zvinozivikanwa nezve humhondi mumba yakatukwa muAmityville, nzvimbo yaigara mhuri uye yaiti ivo vanonzwa manzwi uye vanonzwa hupo hwakavamanikidza kuzvibata nenzira dzisina kujairika. Muchokwadi, kana iwe uchida kuziva zvakawanda, pane yakawanda nhau nezve kuuraya kwakaitika mudzimba idzodzo, pamwe nemamuvhi anoenderana nenyaya yechokwadi.
Mune ino kesi, heino muunganidzwa weizvo zvinozivikanwa nezve chaiwo zviitiko zvakaitika muma 70s.
Mune ropa rinotonhora: 26 ...
Pakati pemabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo, Iyi kubva kuTruman Capote inofanirwa kuve nayo. Uye ndeyekuti inotaura nyaya yekuponda kwakawanda kwakaitika mutaundi reHolcomb muna 1959. Muchokwadi, munyori aifungidzirwa nenyaya iyoyo zvekuti akatamira kudhorobha kunogara kwenguva ikoko kuti akwanise iratidze pamwe nekukwanisika munhoroondo yayo.
Mabhuku akavakirwa pazviitiko zvechokwadi: Kuda
Race, Bonde, uye iyo ...
Iri nderimwe remabhuku asinganyanyo zivikanwa maringe nezviitiko zvechokwadi, asi rinogona kukupa iwe zano rekuti vanhu vemavara vakabata sei nerusarura rwavo. Mune ino kesi, iyo nyaya inotaura hupenyu hwaMildred Jeter naRichard Loving, vaviri vakaroora muWashington muma50.
Ose ari maviri aive neruvara rwakasiyana, uye panguva iyoyo, husiku humwe vakapedzisira vasungwa, nekuda kwekungove nerimwe ganda reganda pakati pavo. Ziva kuti michato yakavhenganiswa yairambidzwa muVirginia.
Dhayari raAna Frank: ...
Iri bhuku, rakanyorwa nemunyori waro, Anne Frank, iri dhayari raakanyorera taura zvaive hupenyu hwake uye kuti mhuri yechiJuda yaigara sei panguva yehutongi hweNazi hweHolland.
Ramba uchifunga kuti akazvinyora aine makore gumi nematatu, asi iyo nzira yekurondedzera uye nemanzwire aunoita uye kunzwa kuti zvairarama musikana iyeye zvinoshungurudza zvakanyanya. Ehezve, inguva pfupi chete, kubva 1942 kusvika 1944.
Mabhuku anobva pazviitiko chaizvo: Iyo Chikara cheFlorence
Iyo chikara cheFlorence: ...
Unogona here kufungidzira uchiverenga bhuku pamusoro pemhondi yekuuraya? Zvakanaka, izvi ndizvo zvaunowana pano, rimwe remabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo zvinotaurira nyaya yemhondi muFlorence iyo yakavhundutsa vanhu kwemakore makumi maviri.
Akaitei? Zvakanaka aifarira bata vakaroora munzvimbo dziri dzoga, kubvira pavakaenda kunzvimbo idzodzo kunoita zviitiko zvepabonde. Nekudaro, akamhan'arwa nemhondi dzakapetwa kasere.
Vasikana vewaya ...
Rakanyorwa naJordi Sierra i Fabra, ibhuku rinotaura chii chisingaonekwe kubva munyika yemafashoni, Ndokunge, zvese zvinoitika kuseri kwezviitiko, kumanikidza kunoitwa sei pamamodeli, kushungurudzwa, zvinodhaka, zvirwere ...
Iyo nyaya yakanyorwa, uye yawana basa rinokanganisa avo vanoiverenga, asi zvakare inokwezva kutariswa. Uye zvakare, zvinoita kuti tifunge kuti, sezvazvinoitika munyika yefashoni, zvinogona kuitika munyika yeterevhizheni, cinema, zvinyorwa, nezvimwe.
Mabhuku akavakirwa pazviitiko chaizvo: Iyo Exorcist
Yakanyorwa naWilliam Peter Blatty, inorondedzera iyo inozivikanwa nyaya mukati meanotyisa mhando. Bhuku rakafuridzira iyo firimu, sezvo ichirondedzera zviitiko zvechokwadi zvakaitika muna 1949, apo musikana ane makore gumi nemaviri akabatwa nadhiyabhori. Mhuri yake yaifanirwa kushevedza munhu anodzinga mweya kuti amubudise kunyange, sezvamunoziva, pakanga paine zvimwe zvakawanda.
Unogona here kufungidzira iwe uchihaya masevhisi emuchengeti uye rimwe zuva ukawana vana vako vafa? Zvakanaka, iyi ndiyo nharo iyo Leila Slimani anoshandisa kutaurira zviitiko chaizvo zvakaitika mubhuku rake.
La Zita raNanny raive Yoselyn Ortega, uye akauraya vana vaviri. Mubhuku, munyori anotitaurira nyaya yevabereki, kuti vakamushandira sei, vakagara naye uye vakatanga kuona kuti hunhu hwake hwaichinja kusvika pamhedzisiro inouraya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku anobva pazviitiko chaizvo